Indawo yokudlala yomdlali engaziwayo iphula iirekhodi kwiStam kwaye iyaqhubeka nokukhula | Iindaba zeGajethi
Yaziwa njenge PUBG Ngaphandle kwamathandabuzo uye waba ngumdlalo omde ngaphambi kokuba ushiye amanqanaba ayo okuqala, kwaye ubandakanya kwinkqubo yayo yomdlalo amanqaku amaninzi atsala abaphulaphuli abaqhele ukubadubula kunye neeMMORPG, kwaye asinakubagxeka ngokudibanisa esithanda kakhulu kokukodwa umdlalo, enyanisweni sinokuthi yile nto kanye le ibifunwa luluntu. Kwaye yenze njalo iPUBG kwakhona, ibetha irekhodi labadlali ngaxeshanye kwi-Steam yokuba i-Dota2 ilawula kude kube ngoku.
Kwaye ulumke kuba ukuma kuyo yonke i-Dota2 ayisiyiyo ncam I-turkey mucus. Yile ndlela iPUBG ifudumeza ngayo iinjini zayo kwaye iqale ukutsala abaphulaphuli be-console abalindele ukukwazi ukonwabela amanqaku ayo.
Ngamafutshane, nantsi indlela ekwaze ngayo ukubetha irekhodi le-Steam lokongeza abadlali abayi-1.342.857 ngaxeshanye, idlula ngama-50.000, 2 irekhodi ebibanjwe nguDota 1.295.114 ukuza kuthi ga ngoku li-XNUMX. Kwaye ulumke kakhulu, kuba njengoko besitshilo, i-PUBG ikwisigaba sokuqala sophuhliso lwayo, ke yonke into ibonisa ukuba iyakuphela iba yeyona midlalo ibalulekileyo kule minyaka ilishumi, ibambene neGTA V. Inkuthazo kubaluleke kakhulu inyani yokuba iya kutsala abaphulaphuli abaziingcali kunye nayo YouTube Sele beyenza imali kakuhle.
Ngamafutshane, ukugqitha ngaphezulu kwesigidi sabadlali abade ngaxeshanye kwi-Steam banokuba nayo into enokuyenza ngokukhula kwe ungumdlali isuka kwi-PC, kodwa asizukuphazamisa nayiphi na into efanelekileyo kulo mdlalo. Okwangoku, asikabi nayo ngqo imihla okanye ulwazi malunga nendlela umdlalo oza kudlala ngayo kwamanye amaqonga, ngaphandle kweempawu ezinkulu kunye nophuculo oluzayo kwi-PC.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Indawo yokudlala yomdlali engaziwayo iphula iirekhodi zeStam kwaye iyaqhubeka nokukhula